Wasiirka beeraha Puntland oo la kulmay waxgaradka degmooyinka Caluula & Baargaal – SBC
Wasiirka beeraha Puntland oo la kulmay waxgaradka degmooyinka Caluula & Baargaal
Kalanka ayaa waxa uu kadhacay hoolka shirarka ee gabolka Bari ee magaaladan boosaaso waxaana ka soo qeybgalay Nabadoono iyo odayaal katirsanaa dagmadada Bargaal iyo Caluula ee gobalka Bari.
Kulanka ayaa ahaa mid uu soo qaban qaabiyeey wasiirka wasarada beeraha iyo waraabka dowlada Puntland Eng Maxamuud Xaji Salaax, waxaanu ugu horeyn halkaasi ka jeediyay hadal ku aadan waxa uu kulankani ku saabsanyahay.
Wasiirku waxa uu sheegay ujeedada shirka in uu yahay ka hadlida dilkii alaha unaxariistee xildhibaan Bille Maxamuud Yuusuf oo lagu dilay degmadada Bargaal ee gobalka Bari
Sidoo kale wasiirka beeraha iyo waraabka Puntland ayaa xusay in nabadagalyadu ay tahay shey aad uwanaagsan layskana ilaawo dhacdadii hore oo aan waxbo laga sooqaadiin, kulana dardaarmay odaysha iyo cuqaasha kasoo qeybgalay kulanka in ay dadar galiyaan nabadada ayna aad u keeyaan.
Intii uu kulanku socaday waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mida nabadoonadii kasooqeybgalay kulan kaas nabadoon Siciid Maxamuud oo hadlay aya sheegay in xildhibaan Bile uu ahaa nin bulshada oo dhan ka baxay isagoona sheegay in ay san jirin dhib tii horana ay xaliyeen mar walbana aay ku dadaalidoonan doorka nabada ka qadankaraan.
Waxaa sidoo kale goobta kahadlay mid ka mid ah odayasha kulankan kasooqeybgalay maxamed yusuf maxamuud waxaana uu sheegay in ay tahay nabadu wax fiican hadana aysan jiriin wax dhibaato ah oo kataagn dhacdadii horana ay xalinayaan ayna ku dadaalayaan sidii ay ugu qeebqadan lahayeen nabadada.
Gabgabadadii kulankan waxaa soo xiray wasiirka wasarada beeraha iyo waraabka dowladada Puntland Eng Maxamuud Xaaji Salax oo ugu baaqay odayshii kulanka kasooqeybgalay in ay joojiyaan coladada kataagan xaliyaana wax alaale wixii khilaaf ka imankaro.